OROMOOF OROMIYAA JIJJIIRUUF ANIS BA'UUN QABA GA'EE MATAA KOO KUTAA TOKKOFFAA | Oromia Shall be Free
OROMOOF OROMIYAA JIJJIIRUUF ANIS BA’UUN QABA GA’EE MATAA KOO KUTAA TOKKOFFAA
bilisummaa April 21, 2017	1 Comment
1. YEROO BIRAAS HIN EEGU OFIS HIN TUFFADHU
Namni waanuma qabu irraa haga murtaa’e tokko namoota biroof qoode, duyina hin jedhamuu
jedha oromoon yeroo mammaku. Marti keenyas waa mara madaallin yookiin wal bira qabiinsaan
ilaalla. Fakkeenyaaf, qabeenyaaf barnoota qabnu yeroo hedduu kan abbootii qabeenyaaf hayyota
addunyaa kana irra turaniif amma jiraniin wal cina qabnee ilaalla yookiin ibsina. Kanarraa
ka’uunis, kiyya xiqqoodha jennee tilmaamnee hiyyeessotaaf wallaalota keessatti of lakkoofna.
Kunis gaarummaa qabaatullee akka ilaalcha kootti dhiibbaa guddaas ni qaba. Fakkeenyaaf,
namoonni tokko tokko ani hiyyeessas wallaalaadhas jechuun jijjiirama ofiifis ta’e lammiif
hawwan argamsiisuu irratti hirmaachuu irraa duubatti kan of deebisan baay’inaan ni mul’atu.
Anis namoota akkasii keessaa tokko ta’uu koo ofan shakka. Mee ati kan barruu xiqqoo kana
dubbisaa jirtu, akkamitti of ilaalta? Maalumaafuu yaada keef furmaata isaa barruun nuuf qooduu
Dabalataanis, HUNDUMTUU YEROO QABA jennee obsaa kan turru yoo ta’e kun obsa osoo
hin taane sodaa natti fakkaata. kanaaf waan jijjiirama hawwinu argamsiisuuf sababa ni ta’a
jennee yaanne kamiinuu guyyaa biroo qofa itti eeguu osoo hin taane, guyyuma har’aa yoo
xiqqaate irraa eegaluu qabna. Guyyaan har’aa kun yeroo nuuf kennamte keessaa tokko kan
taateef kan bakka bu’iinsa hin qabne ta’uu ishii hubachuun barbaachisaadha.
Gabaan waan baateef daldalti jedhama waan ta’eef, dimshaashumaatti dhaamsi (ergaan) kiyya
yaa saba koo ofis ta’e waan of harkaa qabnu (qabeenyas ta’e barnoota ykn hubannoo) tuffannee
jijjiirama dhuunfaa keenyaafis ta’e saba oromoo maraaf hawwinu argamsiisuuf, namoota biroof
yeroo biraa itti eeguun sirrii miti yookiin dogoggora guddaa ta’uu isaan isin hubachiisuu
Barreessaan: Abduselam Mohammed (Hojii: Barsiisaa yuniversitii)
Haga kutaa lammaffaa mata dureen isaa HAYYOOTAA FI BARNOOTA (HUBANNOO)
jedhuun walitti deebinutti nagaan turaa.
Previous ABO Kutaa Iskaandineeviyaa (Scandinavia) fi konyaan ABO Oslo waliin ta’uun kabajan Guyyaa Gootota Oromoo Ebla 29, 2017 magaalaa Oslo itti qopheessee jira.
Next HIRIYOOTA KIYYA KANNEEN BARRUU KIYYA KANA HORDOFAA JIRTAN MARAAF
Barruu kana katabee galmee seenaa irra kayachuun kiyya hedduu na boonse. Nama itti fufu na has taasisu!